Abenzi bePendant Yokuhlinza & Abahlinzeki - I-China I-Factory Pendant Factory
I-TS-D-100 elengayo igesi yezokwelapha elengayo ngegumbi lokusebenza
I-TS-D-100 isho ingalo ephindwe kabili yegesi yezokwelapha kagesi.
Ukuphakanyiswa kwesikhonkwane kuqhutshwa ugesi, osheshayo, ophephile futhi onokwethenjelwa.
Ngegumbi elijikelezayo kabili, ibanga lokunyakaza likhulu. Izokwazi ukufinyelela kangcono esigulini.
Ubude bengalo ejikelezayo nezindawo zegesi, amasokhethi kagesi enziwa ngezifiso atholakalayo.
I-TS-DQ-100 isho ingalo ephindwe kabili yogesi kagesi. Kuyithuluzi elibalulekile ekuhlinzweni kweLaparoscopic. Iqhutshwa ugesi, ilula kakhulu futhi iyashesha. Hhayi kuphela ukuthi ungadlulisa ugesi negesi, kodwa futhi ubeke imishini ethile yezokwelapha. I-100% yenza ngokwezifiso ngosayizi, izindawo zegesi zezokwelapha, nezisekelo zikagesi. Umklamo we-Modular, ungathuthukiswa ngokuzayo.
I-TD-Q-100 elengayo i-End Electric Element Endoscopic Pendant ye-Operation Theatre
I-TD-DQ-100 isho ingalo eyodwa kagesi yokuvala endoscopic elengayo. Le pendant endoscopic ingakhuphuka futhi yehle ngohlelo oluqhutshwa ugesi. Isetshenziswa kabanzi ekamelweni lokuhlinzwa, egumbini lezimo eziphuthumayo, e-ICU nasekamelweni lokutakula. Isetshenziselwa ukuhlinzeka ngokudluliswa kukagesi, ukudluliswa kwegesi kanye nezinsizakalo zokudlulisa idatha, nokubeka imishini yezokwelapha.
I-TD-D-100 Pendant Esebenza Ngamandla kagesi ngogesi onezitifiketi ze-CE
I-TD-D-100 isho ingalo eyodwa kagesi yokuhlinza elengayo.
Isetshenziswa kabanzi ekamelweni lokusebenza nase-ICU. Ukuphakanyiswa kwesikhonkwane kuqhutshwa yimoto, engagijimi futhi esebenzayo kuphela, kepha futhi ephephile futhi ethembekile.
Idalelwe yonke imisebenzi kagesi, idatha kanye negesi yezokwelapha edingekayo.